Mahazoarivo: mpiasa roa lahy maty nihotsahan’ny tany | NewsMada
Adiny roa teo ho eo, taorian’ny nanilihana ireo ranontany sy vato malao maro nanototra azy ireo, vao tafavoaka ny razan’ireto mpiasa roa lahy, maty nihotsahan’ny tany etsy Mahazoarivo, omaly maraina. Avotra soa aman-tsara kosa ny namany efa-dahy na naratra aza.
Lehilahy roa, mpihavana iray fihaviana indray namoy ny ainy, omaly maraina nandritra ny fihotsahan’ny tany tamina “mur de soutiènement” an’ ny misionera Sainte Famille, niasan’izy ireo teny Ambohidreny-Ambohidraserika, fokontany Mahazoarivo, omaly. Fantatra fa nihotsaka tampoka ny tany teo am-pihadiana ny fototra ka nahatonga ny loza tamin’izy fito lahy ireo, manodidina ny tamin’ny 9 ora sy sasany. Nanaitra ny mponina eny amin’ny manodidina ny zava-nisy ka niara-niisalahy namonjy azy ireo ny mponina nialoha ny nahatongavan’ny mpamonjy voina teny an-toerana. Vokany, avotra soa aman-tsara ny efatra amin’ireo mpiasa na teo aza ny ratra nahazo ireto farany. Naratra mafy kosa ny lehilahy iray manodidina ny 18 taona, isan’ireo niasa tamin’ny “mur de soutiènement” ka nalefa notsaboina haingana teny amin’ny hopitalin’Ampefiloha, taorian’ny fanavotan’ny fokonolona azy. Nambaran’ny loharanom-baovao tamin’izany fa mihatsara ny fahasalamany amin’izao fotoana izao.
Sarotra ny fahitana ny nofo mangatsiaka
Voatototry ny tany niampy ireo malao maro isan-karazany niasan’izy ireo ny lehilahy roa, voalaza fa 67 taona sy 23 taona. “Nanano sarotra ny fikarohana ireo roa lahy tototry ny tany omaly iny. Teo ireo tany sy malao nibahana ny toeram-piasana, nanampy izany ny tsy fifanandrifiam-panazavan’ireo fokonolona amin’ny toerana mety ahitana azy ireo”, hoy ny mpamonjy voina. Manoloana izany anefa, niara-niisalahy amin’ireo mpamonjy voina ireo fokonolona ka hita manodidina ny tamin’ny 11 ora latsaka fahatelony ny vata-mangatsiakan’ilay lehilahy 23 taona raha ora telo taorian’izay, izany hoe, manodidina ny tamin’ny 2 ora latsaka folo minitra, vao hita ny nofo mangatsiakan’ilay rangaha 67 taona, tao ambanin’ny tany sy malao marobe eny an-toerana. Taorian’io no nalain’ny BMH ny nofo mangatsiakan’izy mianaka. Fantatra ihany koa fa ao Ihazolava, fokontanin’Ambohipihaonana, Ambatolampy, ny fihavian’ireo niharam-boina.